Wedding na obi - mma
Psychology na mmekọrịta Ezinụlọ na agbamakwụkwọ
Mma nke okike, abụ nke ụmụ nnụnụ, ikuku ọhụrụ ga-ejupụta n'alụmdi na nwunye gị na ịhụnanya. Ọlụlụ agbamakwụkwọ na acha na-egosipụtakarị mmeri dị mma maka "ya", ma ọ pụtaghị na ọ bụ ezumike na-agwụ ike. Ọ bụrụ na ị na-eme ka okpokoro okpokoro dị mma, ị ga-akpọ onye ọbịa obi ụtọ, mgbe ahụ ezumike agaghị echefu gị na ndị ọbịa.
Ịchọ mma nke dacha maka agbamakwụkwọ ahụ anaghị adị oké ọnụ, a ga-eji bọọlụ, ọmarịcha okooko osisi, chọọ ya. A na-eji aprons agbamakwụkwọ na tebụl dochie anya na tebụl, na n'ọnọdụ ọdụm, nke ndị ọhụrụ lụrụ ọhụrụ na-anọdụ ala, a na-eji kọntaktị na-ekwu okwu ma ọ bụ ebe a na-etinye ya na ákwà.
Ọtụtụ ngwa maka agbamakwụkwọ na dacha nwere ike ịme onwe gị, dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike ekekọta eriri akpa na mpempe akwụkwọ, na-eji ụta pụrụ iche ma na-edepụta akwụkwọ edemede nke aha nwoke na nwanyị na-alụ nwanyị ọhụrụ, ha ga-agbakwa agbamakwụkwọ. Ị nwere ike gluo na cardboard tartinki, nke na-etinye obere ncheta maka ọbịa - foto nke na-eto eto, oyiyi nke ejima kpalakwukwu, magnets na onyinyo nke agbamakwụkwọ alụ ọchị, wdg.
Ọ bụrụ na ị kpebie ịme agbamakwụkwọ na Russian, Ukrainian ma ọ bụ Cossack ọdịnala, mgbe ahụ, ọ bụ ịkwanye akwa n'uwe kwesịrị ekwesị. Echefula ihe eji akpa ákwà na akwa akwa na akwa akwa.
Echiche nke agbamakwụkwọ na mba
Ihe eji akwado agbamakwụkwọ nke ụlọ ndị ahụ kwesiri ikwekọ na okike. Ọ ga-abụ ihe kwesịrị ekwesị ile anya ọkasị nke ubi ma ọ bụ ubi okooko osisi na tebụl. Ọ bụrụ na e nwere ọtụtụ Roses n'ime ogige - ị nwere ike ịtọ ụzọ na pink petals.
N'ịjụ otú ị ga-esi nwee agbamakwụkwọ dị mma na dacha ma ghara itinye ego na onye nlekọta ahụ, cheta nke ndị ikwu gị bụ "mkpụrụ obi nke ụlọ ọrụ ahụ", n'ezie na onye a ga-enyere gị aka ịme ọbịa, ga-eduzi asọmpi egwuregwu. Jide n'aka na ị na-eme atụmatụ nke ememme ahụ tupu oge eruo, ụdị ememme, asọmpi , egwuregwu ịgba egwu ị ga-eji. Onye na - abịa ugbu a ga - echeta banyere ọdịnala ndị Russia - iji na - agba nne di na wiilba, na - azụrụ nwanyị na - alụ ọhụrụ, wdg.
Ihe ịrịba ama nke ịkpaghasị
Onyeàmà na agbamakwụkwọ
Agbamakwụkwọ na afọ ụra
Wedding na ụdị nke njem
Achọrọ m ịgbanwe di m!
Olee otú ịkwụsị ekworo di ya?
Kedu ka esi ju di ya anya?
Ọnụ ọgụgụ ịgba alụkwaghịm na Russia
Akwụkwọ ịkpọ òkù maka agbamakwụkwọ
Ihe gbasara ọdịdị nke onye òtù ọlụlụ na nwunye
Wedding na oyi - Atụmatụ
Kedu ka ị si mara na di na-aghọ aghụghọ?
Kedu ụdị ị ga-esi eme agbamakwụkwọ?
Akpụkpọ ụkwụ nwere imi imi
Nzube maka akụ na ụba n'Ugwu Uhie
Uwe ejiji nwoke na 2015
Nbanye - anya aka ekpe na-ejikọta
Kedu ihe ị ga-eyi maka nzukọ ụmụ klas gị?
Kedu ka esi mee ka tulle dị ọcha site na greyness?
Ogige maka ọkụ
Ndebanye aha nke presidium maka agbamakwụkwọ
Kitchenette maka obere kichin
Ntutu isi maka ngụsị akwụkwọ 2014
Kedu ihe bụ symbiosis na nkà mmụta mmekọrịta ụmụ mmadụ na ụdị ụdị symbiosis dị?
Ihe nkedo eji achọ mma n'ime ime
Ugbo na ụkwụ - ọgwụgwọ
Izu iri isii na atọ nke ime ime - na-aga n'ihu na-arụ ọrụ
Ụdị Ejiji Summer 2014